Khabiirka Xaaladaha Khaaska ah wuxuu qeexayaa sida loo xoroobayo Macluumaadkaaga Macluumaadka
Haddii qofku uu dhibaato ka haysto Mac u gaar ah, ama uu ka walwalo in laga yaabo inuu khalad sameeyo,Mashruucan wuxuu ka caawiyaa shakhsiyaadka in ay ka qaadaan lacag la'aan ama jaban. Muhiimad ahaan, waxaa jira tallaabooyin lagu hubinayo inaysan mar kale dhicin.Waa mid aan macquul ahayn in mid ka mid ah uu leeyahay Mac xanuunsan. Si kastaba ha noqotee, fursadaha ay u gudbinayaan kombuyuutarku aad ayuu u sarreeyaa. Maaha in la yidhaahdoin aysan jirin barnaamijyo khayaali ah oo loogu talagalay Macs. Waxaa kaliya oo ah in dadka ugu badan ee la beegsanayaa ay yihiin kuwa isticmaala kombuyuutarka sababtoo ah badankooda - how to buy fake money online.
Caannimada Mac'aad ee sanadihii la soo dhaafay ayaa waxay bedeshay diiradda dadka kufsigaiyadoo bartilmaameedkooda dhabarkooda ay sii kordhayaan maalin kasta. In this article, Julia Vashneva, khabiir ugu horeysay ee ka Sare ,waxay diiradda saaraan dhibaatooyinka iyo fayrasyada saameynaya Macs.
Maxay u tahay Malaa'igtaniyo
Xakameyntu way ka duwan tahay software-ka xun sida fayraska. Sababta waain aysan galin kombiyuutarka iyada oo aan aqoonta isticmaalaha. Xaaladaha intooda badan, waxaa loo qoondeeyay sida software sharci ah sidaas oo kaleisticmaalaha. Waxaa laga yaabaa inay ku jirto qaab xayeysi ah, ama email, taasoo laga yaabo inay ku qanciso isticmaalaha inuu ku xiro barnaamij gaar ah. Laga soo bilaabo markaa, waxay soo ururisaaMacluumaadka gaarka ah ee kombiyuutarka.
Dhibaatada Macmacaanka Mac waa in ay qaadato qaab aad u ah waxyaalahahal rabo inuu isticmaalo wax ka qabashada dhibaatada sida software-ka ah anti-nadaafadda. Khasaaradu waxay qaadaan websiyo sharci ah waxayna dib udhigaan booqdahagoob kale oo ay kudoonayaan in ay ku dhejiyaan oo ay ka helaan macluumaada Mac. Intaa waxaa dheer, taasi waxay ka dhigaysaa talo soo jeedin ah, taas oo ah anacasnimo nafteeda. Isku day inaad tijaabiso oo aad xaliso dhibaatooyinka, waxay ku weydiin kartaa inaad bixiso lacag.
Ka saarida Maciyaha Mac Macluumaadka bilaashka ah
Ka-saaridda software-ka Mac, ama nacasnimadu uma baahna mulkiiluhu inuu waligiis ku qaato adime. Sidaas daraadeed, dadka isticmaala ayaa lagula talinayaa in aysan galin macluumaadka kaararka deynta ee barnaamij kasta ama bogga codsigooda in ay xal u helaandhibaatada kombiyuutarka.
Markuu sidaas sameeyo, haddii wicitaan ka yimaado qof sheeganaya in uu helay xaasidnimobarnaamijka kombiyuutarka ayaa soo dhex maraya, waa kala duwanaansho mawduuca ah, waxaana ugu fiicnaan lahaa in la joojiyo wicitaanka hal mar..
Halkan waa waxyaabo la sameeyo marka barta internetka ay soo baxdo feejignaan sheeganaya in ay heleen software xun:
1. Ka tag tarjumaha.
2. Madaxa ku jira faylka Downloads iyo ku jiid dhamaan faylasha aan loo baahnayn ee bin Bin.
3. Qashin Badeeco.
Haddii mid hore uu horey u qalqaliyay qalabka software-ka ah qalad, talaabooyinka soo socda waa inay caawiyaan:
1. Riix "Command + Shift + U", si aad u furto Folder Utility.
2. Furo Kormeeraha Wax-qabadka iyo dooro dhammaan hababka socodka.
3. Soo hel magaca appka liiska oo guji "Habka Joojinta".
4. Faylka Codsiyada, raadi faahfaahinta app oo ku jiid jeeggaaga kuna madhxiya.
Ilaalinta macmalka macmalka
Ilaa hadda, Macku waa ka madax bannaan yahay dhammaan cambaareynta, waana wax macquul ah in qofku rabosi looga hortago tani mar kale. Talooyinka hoos ku xusan waxay ka ilaalin doonaan Mac Macluumaadka nabdoonaanta mustaqbalka.
Macruuji mar walba mar walba cusbooneysii.
Iska-rog talaabooyinka tooska ah
Isticmaal kaliya barnaamijyada ka imanaya horumarinta aaminka ah
Ku rakib Software antivirus software